တရုတ် VC ကို အပတ်စဉ်: 3D ပုံနှိပ် ခြင်း, Cloud ဂိမ်း များနှင့် Mandarin သင်ယူ - Pandaily
Dec 07, 2021, 18:54ညနေ 2021/12/08 11:03:20 Pandaily
Wenext က တရုတ် ရဲ့ အကြီးဆုံး 3D ပုံနှိပ် ဝန်ဆောင်မှု ပေး သူ ဖြစ်တဲ့ Wenext က ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က VC သတင်း တွေထဲမှာ ဘီ ပတ်ပတ်လည် မှာ ဒေါ်လာ ၅၅ သန်း ရရှိ ခဲ့ပြီး Cloud Game Platform Well-link က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘီ ပတ်ပတ်လည် မှာ ဒေါ်လာ ၆၂. ၇၈ သန်း ရရှိ ခဲ့ကာ လျှပ်စစ် ကား ကုမ္ပဏီ WM Motor က နောက်ထပ် ကြီးမားတဲ့ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ကို ပြီးစီး ခဲ့ပါတယ်။
3D Printing Company Wenext က B Round မွာ ေဒၚလာ ၅၅ သန္း ရရွိ
တရုတ် 3D ပုံနှိပ် ခြင်း ဖြေရှင်းချက် ပံ့ပိုး သူ Wenext က တရားဝင် ကြေငြာ ခဲ့သည် ၎င်း သည်စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅၅ သန်း ဖြင့် Round B ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ခဲ့သည်Cathay Capital Private Equity ၊ Temasek Joint Investment ၊ Haochen Capital, NIO Capital, CAS Investment Management, Creo Capital စသည်ဖြင့် ဦး ဆောင်သည်။
ထို့အပြင် ဤ ဘဏ္ financing ာရေး သည် ယခုနှစ်တွင် စံ မဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို အသိဉာဏ်ရှိသော ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ in တွင် အကြီးမား ဆုံးသော ငွေကြေး ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဆန်းသစ် သော စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု၊ စျေးကွက် ချဲ့ ထွ င်မှု နှင့်နည်းပညာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်အသုံးပြုသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Venleicester သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး 3D ပုံနှိပ် ဝန်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်း ဖြစ်သည်။ ခြောက် နှစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အပြီးတွင် ကုမ္ပဏီသည် 3D ပုံနှိပ် ခြင်း၊ CNC ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆေးထိုး ခြင်း ပုံသွင်း ခြင်းများကို တစ်နေရာ တည်း တွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူ ဖြစ်လာသည်။ လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီ တွင် ဖောက်သည် ၂၀၀, ၀၀၀ ရှိပြီး နှစ်စဉ် အစိတ်အပိုင်း သန်း ၃၀ ကျော် ထုတ်လုပ်သည်။
Cloud Game Platform Well-link သည်ဒေါ်လာ ၆၂. ၇၈ သန်းကို Round B ရန်ပုံငွေ ဖြင့် ပြီးစီး ခဲ့သည်
တရုတ် cloud game service provider Well-link က ကြေငြာ ပြီး nbsp;၎င်းသည် ယွမ်သန်း ၄၀၀ (ဒေါ်လာ ၆၂. ၇၈ သန်း) တန်ဖိုး ရှိသည့် Round B ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို ပြီးစီး ခဲ့သည်ဤ ရန်ပုံ ငွေကို Future Capital မှ ဦး ဆောင်သည်။ CDH VGC သည် Xiaomi , MiHoYo နှင့် Shunwei Capital ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီ များ၏ ရှယ်ယာရှင် များနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။
Well-link ၏အဆိုအရ ဤ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု သည်အဓိကအားဖြင့် virtual world ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သီးသန့် ဆာဗာ များ ၏ဒီဇိုင်းနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု၊ cloud-based rendering ကို အသုံးပြု၍ ဒစ်ဂျစ်တယ် လူသား ပလက်ဖောင်း များ ၏ဒီဇိုင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး အတွက်အဓိက အသုံးပြု လိမ့်မည်။ ဤ ငွေကို & nbsp အတွက်လည်း အသုံးပြု လိမ့်မည်။ “Ark Architecture” ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု။ ရရှိသော ရန်ပုံငွေ အများစုကို & nbsp အတွက်အသုံးပြု လိမ့်မည်။ ဆာဗာ ၏ စီစဉ်ထား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု။
ပြည်တွင်း ဗီဒီယို cloud computing ဖြေရှင်းချက်ကို ဦး ဆောင် သူအဖြစ် Well-link သည် ကုမ္ပဏီမှ သီးခြားစီ တီထွင်ထားသော ဆန်းသစ် သော cloud computing ဗိသုကာ အပြင် real-time audio နှင့် video codec ကဲ့သို့သော အခြား သော့ချက် နည်းပညာ များရှိသည်။ ဤ အခြေခံအားဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် ဂိမ်း အော်ပရေတာ များ၊ developer များနှင့်အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ များအတွက် တစ်နေရာ တည်း တွင် ဖြေရှင်း နိုင်မည့် ၀ န်ဆောင်မှု (PaaS) မော်ဒယ် အဖြစ် အရည်အသွေးမြင့် ပြီး စံ သတ်မှတ်ထားသော cloud game platform တစ်ခု ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
လွ်ပ္စစ္ ကား ထုတ္လုပ္ သူ WM Motor က ေဒၚလာ ၁၅၂ သန္း တန္ D2 စီးရီး ကို ပိတ္သိမ္း
WM Motor က တရုတ် နာမည်ကြီး စမတ် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် (EV) ထုတ်လုပ်သူ & nbsp ကြေညာ ခဲ့သည်;D2 ရန်ပုံငွေ အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၂ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်တရုတ် အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းရှင် Agile Real Estate သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၄၀ ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ Jinhe Commercial Capital သည် ဘဏ္ consult ာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖြစ် ဤ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင် WM Motor သည် D1 စီးရီး ရန်ပုံငွေ မှတစ်ဆင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့ပြီး PCCW နှင့် Shun Tak Holdings တို့သည် ဦး ဆောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများ ဖြစ်ပြီး Guangfa Shun Tak ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံခန့်ခွဲမှု လက်အောက်ခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့အစည်းများ သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများဖြစ်သည်။
WM Motor Automobile ၏အဆိုအရ လက်ရှိ ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်း သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ၅၇ သန်း အထိရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အနာဂတ်တွင် လူသိများသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ များစွာ သည်၎င်း၏ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေရေး ခရီးစဉ် တွင်ပါ ၀ င် လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့် ထားပြီး စုစုပေါင်း ပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ကျော် မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ထို့အပြင် WM Motors သည် Agile Property နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုသည် အမှတ်တံဆိပ် တည်ဆောက် ခြင်းတွင် ရှိလိမ့်မည်။ အရောင်း နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ကွန်ယက် များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊ အားသွင်း စက် များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ခြင်း၊။
WM မော်တော် အကြောင်း
WM ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Motor သည်ယွမ် ၁၅၀, ၀၀၀ မှ ၂၅၀, ၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၂၃, ၂၅၀ မှ ၃၈, ၇၅၀) ကြားရှိ ကား သစ် များ၏ ပင်မ စျေးကွက် ကိုအာရုံစိုက် ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ် သူသည် Wenzhou, Zhejiang နှင့် Huanggang, Hubei ရှိ အပြည့်အဝ ပိုင် ဆို င်ပြီး အလွန် မြင့်မားသော အလိုအလျောက် စက်ရုံ နှစ်ခုကို လည်ပတ် သည်။ အရှုံးပေါ် နေသော ကုမ္ပဏီသည် Star Market တွင် စာရင်း ၀ င် ခြင်းနှင့် ဘက်ထရီ နှင့်ဆက်စပ်သော မီး ဘေးအန္တရာယ် များကြောင့် ကား များကိုပြန်လည် သိမ်းဆည်း ခြင်း များအပါအ ၀ င် ဆုတ်ယုတ် မှုများကြောင့် အတားအဆီး ဖြစ်ခဲ့သည်။
LeetCode သည် အိုင်တီ လုပ်ငန်း ကိုအာရုံစိုက် သော ၀ န်ထမ်းများ အကဲဖြတ် သည့် ပလက်ဖောင်း ဖြစ်ပြီး Round A တွင်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
LeetCode သည် အိုင်တီ လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အင်တာဗျူး များ ကိုပြင်ဆင်ရန် အထူးပြု သည့် လူမှုရေး ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း နီးပါး တန်ဖိုးရှိ Round A ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ခဲ့သည်Light Speed China Partners မှ သီးသန့် ငွေကြေး ထောက်ပံ့သည်။ LeetCode သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက် ပြီး လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင် ပြီးနောက် ဘဏ္ information ာရေး သတင်းအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဖော် ခြင်းဖြစ်သည်။
LeetCode ၏အဆိုအရ နောက်ထပ် ရန်ပုံ ငွေများကို ပလက်ဖောင်း ၏အဓိက ထုတ်ကုန်များ အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်း နှင့်စီးပွားရေး ဂေဟစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း အတွက်အဓိက အသုံးပြု လိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီသည် & nbsp တွင် ရှိလိမ့်မည်။ “Recruitment Platform Construction” နှင့် “စက်မှုလုပ်ငန်း စံချိန်စံညွှန်း များ တည်ဆောက်ခြင်း” သည် လမ်းညွှန် နှစ်ခု လုံးတွင် ဆက်လက် အားဖြည့် နေပြီး တရုတ်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြင်ပ ရှိအခြား စျေးကွက် များကိုလည်း တဖြည်းဖြည်း ဖွင့်လှစ် လိမ့်မည်။
LeetCode ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဆီလီကွန် တောင်ကြား တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစောဆုံး အွန်လိုင်း ၀ န်ထမ်းများ အကဲဖြတ် သည့် ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်း ကို ပ conိသန္ဓေယူ ကတည်းက ဆီလီကွန် တောင်ကြား နှင့် ကမ္ဘာ တွင် ၎င်း ၏သြဇာလွှမ်းမိုး မှုမှာ ဆက်လက် တိုးပွား လာခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:China VC Weekly-စိုက်ပျိုးရေး စက်ရုပ် များနှင့် အလင်း အမြန်နှုန်း သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်း
စင်ကာပူ တရုတ် ဘာသာစကား သင်ယူ ရေး ပလက်ဖောင်း LingoAce သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာသန်း ၁၆၀ ရရှိ ခဲ့သည်
စင်ကာပူ အခြေစိုက် Global Education Technology Company နှင့် ထိပ်တန်း Putonghua သင်ယူမှု ပလက်ဖောင်း Lingoace ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ပံုေငြ အသစ္မ်ား ရရွိရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ရရွိထား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ Sequoia Capital India မှ ဦး ဆောင်သော Owl Ventures ၊ Xiaomi လက်အောက်ခံ Shunwei Capital နှင့် SWC Global တို့ ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီ သည်ဒေါ်လာ ၁၀၅ သန်း တန်ဖိုးရှိ ရန်ပုံငွေ C ကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ Tiger Global နှင့် Owl Ventures တို့ ဦး ဆောင်သော ယခင်က ထုတ်ဖော်ပြသ ခြင်းမရှိသော ဒေါ်လာ ၅၅ သန်း Round B ပြီးနောက် တစ်နှစ် မပြည့် မီ နောက်ဆုံး အလှည့် အပြောင်း ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အရင်းအနှီး အသစ် များအပါအ ၀ င် LingoAce သည်စုစုပေါင်း ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာသန်း ၁၈၀ ရရှိခဲ့သည်။
ဘဏ္ financing ာရေး အသစ် အပြင် LingoAce သည် ရေရှည် ပညာရေး နည်းပညာ ဝါရင့် Marshall Roslyn အား ကုမ္ပဏီ၏ CFO နှင့် မဟာဗျူဟာ အရာရှိ ချုပ် အဖြစ် ငှားရမ်း ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ယခု နွေရာသီ အစောပိုင်းတွင် မာ ရှယ် သည် Goldman Sachs တွင် ပညာရေး နည်းပညာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဘဏ် လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ရန် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု နီးပါး ကြာ အောင် ကူညီ ခဲ့ပြီးနောက် Lingoes နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။ ကန ဦး တွင် ဆန်ဖရန် စစ္ စကို နှင့် မကြာသေးမီက ဟောင်ကောင် ရှိ ကုမ္ပဏီ၏ အာရှ ဌာနခွဲ အကြီးအကဲ ဖြစ်သည်။ ငွေကြေး လည်ပတ်မှု ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အနေဖြင့် Sequoia India ၏ မန် နေး ဂျင်း ဒါရိုက်တာ Abheek Anand နှင့် Owl Ventures ၏ မန် နေး ဂျင်း ဒါရိုက်တာ Ian Chiu တို့သည် Lingoace ၏ ဘုတ် အဖွဲ့တွင် ပူးပေါင်း ပါလိမ့်မည်။ Udemy CEO ဟောင်း Dennis Yang သည်လည်း ကုမ္ပဏီ၏ အကြံပေး ဘုတ်အဖွဲ့ တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
အေၾကာင္း · Ringo é
LingoAce သည် ကလေးများ Mandarin ဘာသာစကား သင်ယူ ပုံ ကိုပြောင်းလဲ နေသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ အကြီးဆုံး စကားပြော သော ဘာသာစကား သည် မိဘ များအနေဖြင့် ကျောင်းသား များအတွက် ပျော် စရာကောင်း ပြီး စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ကောင်းသော ပညာရေး အတွေ့အကြုံ ကိုဖန်တီး ပေး ခြင်းဖြင့် ကလေးများ၏ သင်ကြားရေး ကိရိယာ များ ကိုစီစဉ် ရန်၊ စီစဉ် ရန်နှင့် စောင့်ကြည့် ရန်လွယ်ကူ စေသည်။